China RGB Dynamic LED Panel mpanamboatra sy mpamatsy | Huayuemei
zavatra RGB LED Dynamic Panel
famaritana 240 * 240 * 1.6mm
Haben'ny LED SMD5050
Temperture miloko RGB
fahefana 36w / pcs
1.Ampioreno ny marikao sy ny doka
Ao amin'ny tontolo mazoto ankehitriny, ny marikao sy ny dokam-barotrao dia mila miavaka amin'ny famoronana sy ny singa mahagaga. Zava-dehibe ny fandaniana am-pahendrena ny teti-bolanao nefa tsy hampandefitra ny eritreritra sy ny maha-izy azy. Ny mety atolotry ny takelaka HYM Dynamic LED dia tsy manam-petra. Amin'ny fanovana tsotra izao ny atiny sy ny fanasongadinana ny ampahany amin'ny fanontana nataonao dia mamorona endrika sy fahatsapana hafa tanteraka ianao miaraka amin'ilay sary mitovy aminy.
Misaotra ny boaty maivana, ny marikao dia misarika ny sain'ny maro. Ampiasao izany ary omeo hery ny fampisehoana takelaka fivarotana sy fivarotana ivelany.
2. Tombony amin'ny Panel Dynamic LED
• Mety ho programmable amin'ny karatra K-8000C Control an'ny propotol DMX512.
• Fanazavana fanamiana.
• Mora apetraka ao anaty boaty jiro na celling anao.
• Ataovy amin'ny alàlan'ny fanandramana marika mahafinaritra sy tokana ny mpihaino anao.
• Volavola modular mora apetraka
• Fanovana mora pirinty sy fampidirana sary mihetsika horonantsary
3. Miaraka amin'ireo takelaka LED RGB azo volavolaina, ny RGB dia azo apetraka amin'ny loko 16,7 tapitrisa isan-karazany .Ny rafitra fihenjanana tsy manam-paharoa dia tafiditra mora foana amin'ny volavolanao RGB hanomezana jiro mitovy amin'ny loko rehetra. Ny LED tsirairay dia RGB, midika izany fa mamokatra loko mena sy maintso ary manga izy ireo, raha atambatra, dia afaka mamorona loko amin'ny spektrum,
4. Noho io fiovaovan'ny fiovan'ny loko sy ny fahaizan'ny programa io dia afaka mamorona programa LED somary saro-pantarina isika izay ahitana ny on / off fotsiny, ny fiparitahana sy ny famirapiratana ary koa ny fanovana loko izay afaka mitondra fiainana ilay sary vita pirinty.
Ny boatin-jiro Dynamic 'dia azo alefa amin'ny rindrina, mijoro maimaimpoana amin'ny tongotra, miorina na aato amin'ny tariby. Azo alamina lavitra ihany koa, ny boaty tsirairay dia afaka mampifandray amin'ny tamba-jotra tsy misy toerana eo an-toerana ary misy programa vaovao azo ampitaina aminy raha vantany vao misy famolavolana lamba vaovao.
Teo aloha: Jiro LED tariby mitondra jiro avo be
Manaraka: RGB Dynamic Curtain LED Strip
Module Led Dynamic
Panel Dynamic Led
Modely Led White Dynamic
Panel LED azo arindra ho an'ny boaty hazavana vita amin'ny lamba